पब्लिक कम्पनी बन्दै एनसेल, स्मार्ट, यूटिएल, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइट, २ वर्षभित्र आइपीओ आउने !
ARCHIVE, MARKET WATCH, SHARE MARKET, SPECIAL » पब्लिक कम्पनी बन्दै एनसेल, स्मार्ट, यूटिएल, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइट, २ वर्षभित्र आइपीओ आउने !
काठमाडौँ - एनसेल, स्मार्ट, यूटिएल, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइट अव पब्लिक कम्पनी हुने भएका छन् । संशोधित कम्पनी ऐन अनुसार नेपालका प्राइभेट टेलिकम कम्पनी अब पब्लिक बन्नुपर्ने भएपछि एनसेल, स्मार्ट, यूटिएल, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइट पब्लिक कम्पनी हुने भएका हुन् । यी कम्पनीहरुले उनीहरूले २ वर्षभित्र पब्लिक सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधानसहित व्यवस्थापिका-संसद्ले पारित गरेको ‘कम्पनी ऐन, २०६३’लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी छिन् ।
हालसालै संशोधन भएको कम्पनी ऐनमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका सबै दूरसञ्चार कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोहि ऐनमा यसअघि बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेकोमा अहिले दूरसञ्चार कम्पनी पनि थपिएको छ ।
हालको स्थितिमा नेपाल टेलिकम अहिले पनि पब्लिक नै हो भने एनसेल, स्मार्ट, यूटिएल, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइट प्राइभेट कम्पनी हुन् । संशोधित ऐनअनुसार अबको २ वर्षभित्र यि कम्पनीले पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नुपर्नेछ ।अबको दुईवर्षभित्र ५ करोडभन्दा बढी चुक्तापुँजी भएका सबै टेलिकम कम्पनी पब्लिकमा परिणत भइसक्नेछन् । अहिले ६ वटा टेलिकम कम्पनीले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिररहेका छन् ।